गुरुकुलमा दलित छिराउन हुँदैन भनेर कुन वेदमा लेखिएको छ? | Hindu Khabar
गुरुकुलमा दलित, जनजाती छिराउन मिल्दैन रे, धर्म नष्ट हुन्छ रे! यसो भन्नेहरूले कुनचाहिँ वेद, पुराण पढेका रहेछन्! यस विषयमा म खुला शास्त्रार्थ गर्न चुनौती दिन्छु। इन्तु, किन्तु, परन्तु, चल्दैन। गुरुकुलमा समस्त नेपाली दाजुभाइ/दिदीबहिनीले पढ्न पाउनुपर्छ। बरु गुरुकुलमा विज्ञान विषयको अभाव छ। सर्टिफिकेटमा साइन्स नहुनाले गुरुकुलबाट उत्पादित जनशक्ति मेडिकल, इन्जिनियरिङ, सेना, प्रहरी आदि विविध क्षेत्रको नेतृत्व लिनबाट वञ्चित भइरहेको छ। त्यसलाई पूर्ति गर्नुपर्नेछ। भेदभाव पाप हो, समानता धर्म हो। यही नै ४ वेद १८ पुराणको आदेश हो। यथार्थ बताउने विद्वान् पनि थोरै हुनुहुन्न। ल आउनुहोस् जनमत संग्रह गरौं। गुरुकुलमा सबै जातजातिलाई पढ्न किन रोक्ने? नागरिकन्युजबाट साभार